CUA – Fanadiovana ny tsena : hosazina ny mpamongady mpamatsy mpivarotra amoron-dalana | NewsMada
CUA – Fanadiovana ny tsena : hosazina ny mpamongady mpamatsy mpivarotra amoron-dalana
Par Taratra sur 13/08/2016
Mbola tsy milamina ny tontolon’ny tsena sy ny fandrindrana ny mpivarotra tsy ara-dalàna eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Na sarotra aza ny asa, tsy mihemotra ny mpitantana ny tanàna. Hiditra amin’ny famaizana mafimafy izy ireo miaraka amin’ny mpitandro filaminana mihitsy.
«Tsy maintsy mitohy ny fanadiovana ny mpivarotra sy ny tsena eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra », hoy ny tomponandraikitra faharoa ao amin’ny CUA. Nisy fiatoana kely izany teo fa miverina amin’izao fotoana izao izay sahanin’ny olona 50 eo ho eo. « Tokony hifindra eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo sy Antanimbarinandriana ny mpivarotra tsy tafiditra amin’ireo tsena efa misy », hoy ny fanazavana azo. Tsy manaiky anefa ireo mpivarotra fa mangataka ny hiasa eny amin’ny Esplanade Analakely fa tsy hifindra toeran-kafa. Nanambara izy ireo fa izay no nifanarahana tamin’ny mpiasan’ny kaominina. Nanamafy ity farany fa tsy tomponandraikitra avy ao amin’ny CUA velively ny nifampiraharaha tamin’ny mpivarotra. Mihenjana ny tady ka nisy ny hetsika nataon’ny mpivarotra maromaro nanoloana ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly maraina. Nangataka ny tsy hafindra toerana ankoatra ny eo amin’ny Esplanade izy ireo.
Hentitra ny mpitantana ny tanàna nilaza fa tsy ny mpivarotra eny amoron-dalana ihany fa hosazina hatramin’ny mpamongady mpanome entana azy ireny. Hiara-hiasa amin’ny polisy nasionaly, ny prefet de police miaraka amin’ny minisiteran’ny Varotra sy ny minisiteran’ny Fitantanam-bola ny kaominina amin’ny fanasaziana ny tsy mpanara-dalàna. Hitohy ny fanentanana amin’ny hifindran’ny mpivarotra ara-dalàna eny Ambohijatovo sy Antanimbarinandriana. « Rehefa tsy mety miala, alaina ny entany ary miafara amin’ny fandoavana lamandy sy ny fanagadrana mihitsy », hoy ny mpiandraikitra ny kaominina. Manimba ny asan’ny mpivarotra ara-dalàna mandoa hetra amin’ny fanjakana ny mpivarotra amoron-dalana ka tsy azo ekena. 7 000 ny mpivarotra efa voaisa amin’ny 50 000 misy amin’izao fotoana izao.